GoldMan HD ကို Mac App Store တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်အခမဲ့ပေးသည် ငါက Mac ကပါ
GoldMan HD ကို Mac App Store တွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာပေးသည်
GoldMan HD များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်စျေးနှုန်းရှိပါတယ် 4,99 €နှင့်ကန့်သတ်အချိန်အဘို့သင့်ဥစ္စာဖြစ်နိုင်သည် လုံးဝအခမဲ့။ ဒီဂိမ်းမှာရှိတယ် ဒေါင်းလုပ် ၂ သန်းကျော်ကောင်းပြီ၊ ဒါကအရမ်းရယ်စရာကောင်းတယ်တဲ့။ Goldman HD တွင်မင်း၌သူ့ဘဝတွင်တစ်ခုတည်းသာရှိသောရွှေသတ္တုတွင်းကိုသင်ထိန်းချုပ်ရမည်။ သူကနောက်ထပ်များစွာသောရွှေပမာဏရရန်သူ၏လမ်းရှိအရာအားလုံးကိုဖျက်ဆီးရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ သူသည်သဘာဝဖြိုဖျက်ခြင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သင့်ဆီသို့ကျသွားသည့်မြေအမျိုးအစားများအတွက်ပေါက်ကွဲမှုများစွာရှိသည်။ အမျိုးမျိုးသော၏ Molotov ကော့တေး, လောင်ကျွမ်းသောမီးသွေးအလွန်အစွမ်းထက်ရန် TNT အစိုင်အခဲကျောက်ဆောင်ကိုချိုးဖျက်ဖို့။ GoldMan HD တွင်ပျော်စရာအဆင့်နှင့်ဂိမ်းအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုရရှိနိုင်သည်။
ဂိမ်းက အရမ်းရယ်ရတယ်နှင့် Mac App Store နှင့် App Store နှစ်ခုလုံး၏သုံးသပ်ချက်များသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ၎င်းကိုဒေါင်းလုဒ် လုပ်၍ ၎င်းကိုယခုအခမဲ့ဖြစ်သည်ကတည်းကကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဒီဂိမ်းကအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်ဟာကဘယ်ဘာသာစကားမှာအရေးမကြီးဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းကိုအချိန်အများကြီးပေးဖို့မင်းကိုမလွှမ်းမိုးစေဘူး။
အဆင့် ၁၀၀ ကျော် - သင်အမြတ်ထုတ်ရန်များစွာရှိသည်။
ထူးခြားသောဆုကြေးစနစ် - ၃ ခုရရှိရန်အတွက်ဆုဖလားစုဆောင်းခြင်း!
ဗုံး ၈ မျိုး - Molotov မှ TNT အစွမ်းထက်သောကော့တေးမှသင်လိုချင်သမျှ!
ကွဲပြားခြားနားသောမြေဆီလွှာအမျိုးအစားများ - တစ်ခုချင်းစီကိုဖျက်ဆီးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှာပါ! တကယ့်ဘဝမှာမလုပ်ပါနဲ့။
စူပါလက်နက်စနစ် - ဗုံးပေါက်ကွဲမှုအမြောက်အများ!
တင်ပါတယ်: 06 / 03 / 2013
အရွယ်: 48.8 ကို MB
ဆော့ဖ်ဝဲရေး: GameShock လီမိတက်တာဝန်ခံကုမ္ပဏီ
compatibility: OS X 10.6.6 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်မှ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » GoldMan HD ကို Mac App Store တွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာပေးသည်
iOS9၏ News app ကိုတရုတ်ဆင်ဆာဖြတ်တောက်
အက်ပဲလ်သုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏အကောင့်များကိုခိုးယူရန် phishing အီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိသည်